Indlela yokuQhawula ukuSebenza isebenza njani
Ukukhutshwa kwe-induction yinkqubo eshushu yokulungiselela umphezulu Umvelisi we-induction uthumela enye into yangoku ngokusebenzisa i-coil yoqheliso, eyenza umhlaba usebenze ngombane. Le ntsimi inciphisa imisinga eguqulwa ibe bubushushu xa idibana nezinto zokuqhuba ezinje ngentsimbi. Ubushushu buveliswa phantsi kwento yokunxiba, obangela ukutyabeka kukhawuleze. Le ndlela ilungele ukunyanga indawo ethe tyaba okanye egobile kwindawo yokusebenza kwaye ayifuni kuvalelwa.
Inkqubo yokuqhawulwa kwe-induction iya kuluhluba ipeyinti, ezinye iiringi, irusi enzima, ukubola kwebacteria kunye neoyile kunye negrisi yokuhambisa umbane (isinyithi se-ferromagnetic) esaphula ukudibana phakathi kwezinto kunye nentsalela ye-substrate etch, ukufudumeza indawo kunye nokulawulwa okusebenzisa amandla amancinci.
I-HLQ yenza lula iimfuno zakho zokususwa kwethambeka ngobunye ubuchwephesha botshintsho: Induction Stripping! Isixhobo se-HLQ sokukhulula izixhobo zisusa iingubo zakho ezinzima kwezintsimbi ngaphandle kwengxolo okanye inkunkuma yesibini-ukuya ezantsi kwisinyithi.
Ukuba ukhe wanqwenela umlingo ukuba usombulule ukususwa kwentloko yakho, i-HLQ yeyona nto ilungileyo. Isazi se-HLQ sinokuhambisa i-wand yethu yokungenisa ngaphezulu kwengozi yakho yokutyabeka kwaye ushiye ubophelelwano kwezona zinzima ukususa iingubo kumanqanaba afikelela kumaxesha ali-10 ngokukhawuleza kuneetekhnoloji ezikhuphisanayo njenge-sandblasting. ! Xa amagcisa e-HLQ ehambisa intloko yethu yokungenisa ngaphezulu komphezulu wentsimbi, kudala ubushushu obaneleyo (ngesiqhelo i-300 ukuya kwi-400 degrees) ukukhawulezisa ukudibanisa uninzi lweengubo ezivela kwiitanki, iitanki, imibhobho, iinqanawa kunye namaqonga onxweme, avumela ukutyabeka (ukuya kuthi ga kwi-intshi enye) ukuba isuswe ngamashiti.
Ukususwa kobushushu beRPR yoBushushu
Ukususwa kobushushu beRPR yoBushushu isebenza ngomgaqo woqheliso. Ubushushu buveliswa kwi-substrate yentsimbi kwaye iqhina kwi-interface yentsimbi kunye nokwaleka kwaphuliwe. Ukutyabeka kususwe ngokupheleleyo ngaphandle kokuqhekeka kwaye kukhululeke kwaphela kwiiarhente ezingcolisayo, okt. ukuqhuma kweendaba. Oku kwenza ukuba ukulahlwa nokurisayikilisha inkunkuma kube lula kwaye kubize iindleko.
Ukusetyenziswa kwamandla ubuncinci kwaneengqayi eziqinileyo nezona zinzima zinokususwa ngokupheleleyo. Ukungeniswa kobushushu beRPR ikhawuleza kuneendlela eziqhelekileyo. Indlela ethe cwaka yokususa ukutyabeka kuthetha ukuba iinjineli zethu zinokusebenza emini okanye ebusuku ngaphandle kongcoliseko lwengxolo.
Ngenxa yezibonelelo ezininzi zenkqubo yethu yokufudumeza indawo, sikwazile ukubonelela uluhlu olubanzi lwabathengi be-Alliance ngenkonzo abayifunayo. Sisebenze nabathengi kumashishini anjenge:
Ukutya kunye nokulungiswa kwesiselo
Iinkonzo zokuthengisa nokutya
Iihotele kunye nokubuk 'iindwendwe
Amachibi orhwebo kunye namanzi
Inkqubo yokulahla umhlathi ye-HLQ yokuqhawula inkqubo isusa uninzi lweentlobo zokwaleka, kubandakanya:
Amalahle eTar epoxy
Itshati yokucima umlilo okanye ezinye iingubo zokuvala
Ngokukhawuleza, ngokuzola, nangokucocekileyo, ngokulungiselela umphezulu okhuselekileyo
Abanye banokuthi ukukhutshwa kwe-induction yindlela "ekhawulezayo nengcolileyo" yokwenza umsebenzi, kodwa inyani iyakhawuleza, kwaye ayinangxaki kwaphela. Kuba ukuthathwa kwe-induction kudala inkunkuma yesibini, ukucocwa kwenziwa lula. Ukujongana namashiti okanye imicu yokwaleka kulula ngokungenasiphelo kunokujongana nemithombo yeendaba kuqhume kunye nothuli.
Kwiimeko ezininzi, isiqulatho sinokwenziwa lula okanye sisuswe ngokupheleleyo. Khawufane ucinge ususe iprojekhthi ebiza imali eninzi kunye neprojekthi yokuthintela kwaye uyitshintshe ngokunyusa i-snorkel kunye nelaphu elilahlayo!
Olunye urhwebo lunokusebenza kufutshane nemisebenzi ye-HLQ yokuqhawula imisebenzi kuba yinkqubo ethe cwaka engazukuyenza ingxolo eyoyikisayo ephazamisa imveliso yezinye iikhontrakthi onokuthi usebenze kuzo kwiprojekthi yakho.
Izixhobo zethu zokungenisa izixhobo azinazinto zishukumayo, ezenza ukuba inkqubo yethu ikhuseleke ngakumbi kunokuqhushumba kwehydro okanye ukubetheka kwesanti kubasebenzi bakho, ezinye iikontraki, abathengi kunye nabantu abadlulayo.
Induction Umatshini wokuSonga Inkqubo yoKwenza iPeyinti Inkqubo ye-RPR yokungenisa
iindidi Teknoloji tags Ukufudumeza ukususwa kwengubo, ukutyabeka ubushushu, ukufudumeza ubushushu, ukususwa kwepeyinti, Ukophuka kwepeyinti, inkqubo yoqheliso PRP, inkqubo yoqheliso RPR, ukususwa kwerusi, ukurusa umhlwa, ukukhutshwa kwe-induction, inkqubo yokuqhawula, RPR Post yokukhangela